Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Ukraine iyo Midowga Yurub ayaa kala saxiixday heshiis furan oo furan
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Ukraine War Deg Deg Ah
Heshiiska Cirka ee Midowga Yurub iyo Ukraine waa in ay ansixiyaan Ukraine iyo waddan kasta oo xubin ka ah Midowga Yurub si uu u dhaqangalo.
Heshiiska Aagga Madaniga ah ee Wadaagga ah ayaa la filayaa inuu Ukraine u fidiyo waddooyin qiimo jaban oo kor u qaada dalxiiska.
Waqtigan xaadirka ah, Ukraine waxay heshiis adeeg hawadeed oo laba geesood ah la leedahay dal kasta oo ka tirsan Midowga Yurub.
Heshiiska cusub ee Midowga Yurub ayaa dhigaya in xayiraadaha laga qaado tirada duullimaadyada la qaadi doono.
Midowga Yurub (EU) iyo Ukraine ayaa kala saxiixday Heshiiska Aagga Duulista Hawada oo dhisi doona meel duulimaad oo wadajir ah, sida ay sheegtay adeegga saxaafadda ee madaxweynaha Ukraine.
Heshiiska Aagga Duulimaadka Madaniga ah, oo si weyn loogu yaqaanno Heshiiska Furan ee Cirka, ayaa la filayaa inuu Ukraine u fidiyo waddooyin hawo oo qiimahoodu aad u jaban yahay isla markaana kor u qaadi doona dalxiiska, taas oo ay ugu wacan tahay hirgelinta qasabka ah ee heerarka iyo xeerarka reer Yurub ee duullimaadka hawada.
Waqtigan xaadirka ah, Ukraine waxay heshiisyo adeegyo hawleed laba geesood ah la leedahay dal kasta oo ka tirsan Midowga Yurub. Waxay xadeyn ku sameeyeen tirada gaadiidleyda iyo duulimaadyada toddobaadlaha ah. Tani waxay ku adkeysay shirkadaha cusub inay galaan duulimaadyada caanka ah.
Heshiiska cusub ee la EU ayaa qeexaya in la qaadi doono xayiraadaha saaran tirada gaadiidleyda iyo duulimaadyada. Diyaarad kasta oo hawo ah ayaa awoodi doonta inay ku duusho waddooyinka caanka ah, ma aha oo kaliya monopolists. Taas macnaheedu waa in shirkadaha diyaaradaha ee jaban ay heli doonaan fursad ay suuqa ku galaan.
Ryanair, mid ahaan, ayaa hore ugu dhawaaqay “ballaarinta gardarada ah” ee Ukraine mar haddii waddanku ku biiro suuqa duulimaadyada ee la gooyay ee Open Skies, iyada oo qorshuhu yahay in duulimaadyo laga furo 12 garoon diyaaradeed oo Yukreeniyaan ah halkii ay hadda ahaan lahaayeen 5, iyo sidoo kale furitaanka adeegyada gudaha.
Iyada oo ay la socdaan duullimaadyada cusub, rakaabku waxay filan karaan war aad u wanaagsan - qiimaha tigidhada ayaa la filayaa inuu hoos u dhaco taas oo ka dhalatay tartan kordhay iyo dhammaadka keli -talisyada meelaha caanka ah. Sidoo kale, qiimayaasha ayaa la dhimi doonaa heshiiska oo xaq u siinaya shirkad kasta oo duulimaad inay maamusho rakaabka garoomada.
Marka laga reebo rakaabka, garoomada diyaaradaha ee gobolka Yukreeniyaan ayaa la filayaa inay faa'iidooyin ka helaan isbedelada. Waxay heli doonaan diyaarado badan waxayna yeelan doonaan socodka rakaabka oo weyn. Taas macnaheedu waa in garoomada diyaaradaha ee gobolku ay yeelan doonaan fursado badan oo maalgashi iyo horumarin ah.
Mid kale oo lagu daray heshiiska rakaabka Yukreeniyaanku waa hordhaca Midowga Yurub caadooyinka iyo heerarka duulista rayidka Yukreeniyaan.
Xafladda saxiixa ayaa waxaa goob joog ka ahaa Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, Guddoomiyaha Golaha Yurub Charles Michel, iyo Guddoomiyaha Guddiga Yurub Ursula von der Leyen.
Heshiiska, oo qalinka ku duugay Shirkii 23-aad ee Ukraine iyo Midowga Yurub ee ka dhacaya Kiev, wuxuu furi doonaa suuqyada hawada ee Ukraine iyo Midowga Yurub wuxuuna xoojinayaa badbaadada hawada, taraafikada hawada, iyo ilaalinta deegaanka, sida lagu sheegay war saxaafadeedka madaxtooyada.
Heshiiska Cirka ee Midowga Yurub iyo Ukraine waa in ay ansixiyaan Ukraine iyo mid kasta Midowga Yurub dal xubin ka ah si ay u dhaqan gasho.